सुनसरी २, साँवा र हेमकर्ण कस्काे पल्ला भारी ? (भिडियो सहित ) | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
सुनसरी २, साँवा र हेमकर्ण कस्काे पल्ला भारी ? (भिडियो सहित )
इटहरी । सुनसरीको इटहरीलाई प्रदेश नम्बर १ को राजधानी दाबी गरिएको अबस्थामा त्यही क्षेत्रबाट प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुका महत्वपुर्ण एजेण्डा के रहेका छन र प्रमुख दाबेदारहरुको अबस्था त्यो क्षेत्रमा के रहेको छ भन्ने बारेमा पुर्बेली न्युजको टिमले प्रमुख दुई दाबेदारहरु सँग सो क्षेत्रको अबस्थाका बारेमा भिडियो कुराकानी समेत गरी त्यो क्षेत्रको नालीबेली उतार्ने प्रयास गरिएको छ ।
सुनसरीको इटहरी हरेक हिसाबले पुर्बको महत्वपुर्ण हबका रुपमा परिचित छ । बिकासका पुर्बाधारदेखि हरेक हिसाबले समृद्ध मानिएको यो क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रशस्त आधारहरु रहेका छन । यो क्षेत्रमा चर्चित २ उम्मेदवारको उम्मेदवारीका कारण यो क्षेत्रको माहोल गर्माएको छ । यो क्षेत्रमा प्रदेशसभाका लागी नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट लोकप्रिय मानिएका हेमकर्ण पौडेल र इटहरी नगरपालिकाको पहिलो मेयर सर्बध्वज साँवाबिच चुनावी भिडन्त हुँदैछ । यो भिडन्तलाई यस क्षेत्रमा हेभीवेट भिडन्तभन्दा महत्वपुर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
जनताको विश्वास नै निर्वाचन जित्ने आधार हो : पौडेल
हेमकर्ण पौडेल इटहरीमा मात्र नभएर सुनसरीमा नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा सबैभन्दा आशलाग्दा ब्यत्ति हुन । इटहरीमा मात्र होईन पुर्व क्षेत्रमा नै उनको लोकप्रियताको चर्चा हुने गरेको छ । स्थानीय निर्बाचनमा इटहरी नगरपालिकाको मेयरमा उनले टिकट नपाउँदा उनका समर्थकले गरेको प्रर्दशनले पनि राम्रो चर्चा पायो । बिकास निर्माणदेखि गरिबका झुपडीसम्म छाएका पौडेल यो क्षेत्रमा सबैभन्दा लोकप्रिय ब्यत्ति हुन ।
बि.स २०३५ सालमा झापाको कोरोबारीमा जन्मिएका पौडेल २०४६ सालदेखि सुनसरीको इटहरीमा बसोबास गर्छन । २०५५ सालमा जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरीको स्वबियु सभापति,तरुण दल सुनसरीको सचिब,नेपाल बिद्यार्थी संघ सुनसरीको सचिब,पार्टीको क्षेत्रीय सदस्य हुादै २ कार्यकाल इटहरीको नगर सभापति भएका उनी इटहरीमा सर्बाधिक रुचाईएका ब्यत्ति हुन । सबैलाई समेटेर अगाडी बढन सक्ने खुबस् भएका पौडेल यस क्षेत्रमा मुख्य प्रतिष्पर्धी हुन । आफुप्रति जनताले देखाएको बिश्वास नै चुनाव जित्ने मुख्य आधार भएको बताउने पौडेलले निर्बाचनमा आफनो जित सुनिश्चित भएको बताए । जनताले आफुलाई बिश्वास गर्नेमा उनी ढुक्क देखिन्छन ।
विगतमा गरेका काम सम्झेर जनताले मलाई नै जिताउछन्: साँवा
इटहरी नगरपालिकाको पहिलो मेयर सर्बध्वज साँवा हेमकर्ण पौडेलका मुख्य प्रतिपष्र्धी हुन । २०१० सालमा ताप्लेजुङको खोक्लिङमा जन्मिएका उनले राजनीतिमा डिग्री उर्तिण गरेका छन । २०३६ सालदेखि २०४६ सालसम्म भुमिगत राजनीति गरेका साँवा हाल नेकपा एमालेको प्रदेश नम्बर १ को कमिटि सदस्य रहेका छन ।
इटहरीलाई हरित नगरीका रुपमा बिकास गर्न महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गरेका उनले तालतलैया निर्माण देखि ईटहरीको बिकासका लागी आफुले खेलेको भुमिकाका कारण पनि आफुलार्य इटहरीका जनताले भोट दिने बिश्वास ब्यत्त गरेका छन ।
सुनसरीको इटहरी नगरपालिकाको १,२,३,४,५,१६,१७,१८,१९,२० र रामधुनीको ३ र ५ नम्बर वडा समेटिएको सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ क अन्र्तगत पर्ने यो क्षेत्रमा ६८ हजार ८ सय २० मतदाता रहेका छन । स्थानीय निर्बाचनमा मेयर र उपमेयर एमालेले जितेपनि वडामा काँग्रेस बलियो देखिएको थियो । बामगठबन्धनको मत जोडदा भने ती क्षेत्रमा गठबन्धन बलियो देखिन्छ । तर आदिबासी समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको क्षेत्रमा उनीहरुको मत निर्णायक बन्ने समेत अबस्था रहेको छ । – पुर्बेली न्युज
Email: wwwnepaleseor[email protected]